अन्तरवार्ता : जनतालाई ढाँट्नेका दिन सकिए : डा. नारायण खड्का-Nagarikaawaj.com
२०५६ सालको आम निर्वाचनपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको राजनैतिक सल्लाहकार र त्यसपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएका डा नारायण खड्का २० बर्ष देखि निरन्तररुपमा उदयपुर जिल्लाको समग्र विकासका लागि तल्लिन भइरहेका जिल्लावासीका लोकप्रिय नेता हुन् ।
उदयपुर जिल्लावासी जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने दिशामा अहोरात्र खटेका कारण आम जनतासामु लोकप्रिय छवी बनाएका खड्का पहिलो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भारी मतान्तरले उदयपुर जिल्ला क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित भए ।
उदयपुर जिल्लाको सदरमुकाम गाईघाट क्षेत्रको मुख्य समस्याका रुपमा रहेको त्रियुगा नदीमा पुलको व्यवस्था गर्ने काम उनको पहिलो उल्लेख्य काम थियो । त्रियुगा जनता क्याम्पसमा पूर्वान्चल क्षेत्रकै नमुना पुस्तकालय भवन उनकै पहलमा बनेपछि खड्का जिल्लाका आम वुद्धिजीवीमाझ थप लोकप्रिय बने ।
जोगीदह, हडिया, बेल्टार, रामपुर लगाएतका दर्जनौं विद्यालयमा करोडौं रुपैयाँका भवन उनकै पहलमा बने । दउरी, हडिया, रामपुर लगाएतका गाउँमा एक दर्जन बढी खानेपानीका योजना उनकै पहलमा संचालनमा आएका छन् ।
सडक निर्माण, विद्युत विस्तारजस्ता जनताका अति आवश्यकीय आवश्यकता पूरा गर्ने काममा खड्का अहिले पनि निरन्तर लागिरहेका छन् । खड्काले उदयपुर क्षेत्र नं १ का साविकका हरेक गाविसमा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेका छन् र गाउँका सर्वसाधारणलाई अस्पतालसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाएका छन् । उनै डा. खड्कासँग नागरिक आवाजले गरेको कुराकानी :
उदयपुर जिल्लामा अब के काम गर्न बाँकी छ ? समस्या के छन् ?
मैले जनताका बृहत्तर हितका योजनालाई आगामी दिनका लागि प्राथमिकतामा छु । जस अनुसार त्रियुगा नदीका साथै अन्य एक दर्जन खहरेखोला नियन्त्रण गर्ने काम पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ । त्रियुगा नदीले यहाँको हजारौं बिघा खेतियोग्य जमिनलाई बगर बनाएको छ र यसकै कारण कतिपय मानिस सुकुम्बासी बनेका छन् ।
त्रियुगाको कालिखोलादेखि वेलकाको सप्तकोसीसम्म दुवै तर्फ बलियो बाँध निर्माण गर्ने र त्यो बाँधलाई सडकको रुपमा बिस्तार गर्ने मेरो पहिलो योजना छ ।
यो सँगै गाईघाट फत्तेपुर सडक खण्डका अन्य खहरे नियन्त्रण गरेर खेतियोग्य जमिनको उकास गर्ने र यस क्षेत्रलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने मेरो अर्को योजना छ । सडक यातायातको विस्तार हुँदै गरेकाले कृषिलाई व्यावसायिककरण गर्नु आवश्यक छ ।
त्रियुगा नगरपालिकाको वडा नं २ जोगीदहस्थित एअरपोर्ट निर्मांणको कामलाई युद्धस्तरमा अगाडि बढाएर निर्माण गर्नु पर्ने काम छ । आम सुकुम्बासी नागरिकलाई आवश्यक कानुन निर्माण गरेर जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा बितरण गर्नुछ । यी बाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक यातायात लगाएतका क्षेत्रमा पनि काम गर्नु छ । उदयपुरलाई भोजपुर र खोटाङको दक्षिणी क्षेत्रलाई जोड्ने सडक संजाल बिस्तार गर्नुछ ।
तपाईका चुनाव जित्ने आधार के छन् ?
बिपक्षीले मेरा बारेमा जति नै भ्रम छरेपनि त्यो जनता पत्याउँदैनन् । किनभने लगातार ३ पटक यस क्षेत्रबाट चुनाव जितेर गएका कम्यूनिष्ट पार्टीका साथीहरुले सिन्को समेत भाँच्न सकेनन् । जनतालाई आश्वासन र ढाँटले मात्रै भोट लिने काम गरे । जसले गर्दा यस क्षेत्रको विकास २५ बर्ष पछि धकेलियो । अहिले बिस्तारै विकासको बाटोमा अगाडि बढिरहेको सबै जनतालाई जग जाहेर छ । त्यसैले जति भ्रम छर्न खोजेपनि यस क्षेत्रका आम जनताले मलाई राम्रोसँग र नजिकबाट चिनेका छन् ।
यस क्षेत्रका कुनै एउटा गाउँ छैनन् जहाँ म नपुगेको छु । यसको अर्थ म हरेक गाउँमा पुगेको छु र जनताको आवश्यकता अनुसारका काम गरेको छु । जनतालाई परेका हरेक अप्ठ्यारोमा सकेको सहयोग गरेको छु ।
एक बर्ष, दुईं बर्ष होइन, म वितेका करीव २ दशकदेखि निरन्तर यस क्षेत्रका जनताको सम्पर्कमा छु । मैले अवका मेरा बाँकी कामका योजना सुनाउँदा जनताले खुशी व्यक्त गर्ने गरेको मैले पाएको छु । त्यसैले मेरो विजयी हुने कुरालाई केपी ओलीले भाषण मात्रै होइन, यही आएर डेरा जमाएर बसेर जतिसुकै ढाँटेपनि रोक्न सक्दैनन् । जनता ढाँट्नेका दिन गए ।
उनका उखान टुक्काले यस क्षेत्रका कोही जनता ढाँटिने अबस्थै छैन । म ढुक्क छु । यस क्षेत्रका सबै जातजाति र भाषाभाषी आम समुदायका मतदाताको उत्साहको म हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु ।
यस अघि तपाईले गरेका खासखास काम चाहि के थिए ?
विगत २० बर्ष यता मैले यस क्षेत्रमा धेरै काम गरेको छु । एक दर्जन भन्दा बढी ठाउँमा करोडौंका बिद्यालय भवन बनेका छन् । जोगीदह, हडिया, बेल्टार, रामपुरका विद्यालयलाई उदाहरणका रुपमा हेरे पुग्छ । भोजपुर र खोटाङ जोड्न रानिटार र धाप्लाङमा पुल बन्दैछन् । यी लगाएत धेरै पुल पुलेसा मेरो सक्रियतामा बनिसकेका छन् । सुन्दरपुर, तपेश्वरी लगाएतका ठाउँमा महिला आयआर्जनका लागि प्रत्यक्ष देखिने काम गरेको छु ।
मैनामैनी, बबलाको विकासमा त्यत्तिकै लागेको छु । त्रियुगा नगरपालिकाका दर्जन बढी ठाँउमा मैले त्यसरी नै काम गरेको छु । राष्टिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा मेरो पहलमा त्रियुगा खोलामा पुल निर्माण गराएर खोला तर्दा ज्यान गुमाउनु पर्ने अबस्थाको अन्त्य भएको छ । जुन कुरा यहाँका जनताले सम्झिरहेका छन् । गरीव जनताका छोराछोरीले उच्च शिक्षा हाँसिल गर्ने त्रियुगा जनता क्याम्पसमा पुस्तकालय भवन निर्माणको काम मैले नै गरेको हुँ ।
देउरीमा खानेपानी योजना, जोगिदहमा विद्यालय भवन, एअरपोर्ट निर्माणजस्ता काम मेरो पहलमा भएका र हँुदै गरेका छन् । यस्ता धेरै कामहरु मैले यहाँ पनि गरेको छु जुन काम जनताले प्रत्यक्षरुपमा देखेका छन् । त्यसैले यहाँका आम जनताले मलाई यस पटक मतदान गर्नुहुन्छ र थप विकासका काम गर्ने अवसर दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा म ढुक्क र बिश्वस्त छु ।
निर्वाचनपछि केपी ओली र प्रचण्डले भने झै एमाले र माओवादी केन्द्रबिच पार्टी एकिकरण होला ?
पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका बिचको सम्वन्धमा केही दरार उत्पन्न भएको हुनसक्छ किन भने उहाँहरु दुवैले सम्वोधन गर्ने भनिएका आमसभामा केपी मात्रै जाने गरेका छन् । वामदेव गौतमले आफु प्रधानमन्त्रीका लागि योग्य छु र निर्वाचनपछि म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्दै हिँडेका छन् । त्यसैले जति समय बढ्दैछ गठबन्धनका निम्ति त्यति नै समस्या थपिँदै छ ।
त्यसैले पनि यो एकिकरणको कुरा निर्वाचनसम्मका लागि होला जस्तो मलाई लाग्छ । निर्वाचन परिणाम सोचेजस्तो आउन सक्दैन । जसका कारण दुवै पार्टीबिच एकले अर्कोलाई आरोप लगाउने क्रम सुरु भई व्यापक खट्पट् हुने र गर्ने भनिएको पार्टी एकता अबरुद्ध हुने प्रसस्त आधारहरु छन् ।
यसरी एकिकरण प्रक्रिया अबरुद्ध भयो भने पछि आगामी सरकार कांग्रेस र माओवादी केन्द्र अथवा एमाले र कांग्रेसको पनि ंबन्न सक्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत बुझाई छ ।